Shina: Tsy mahazo hoentina ao amin’ny lalao olaimpika ny sora-baventy “Alefa Shina!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2018 4:46 GMT
Iharan'ny fitsipika iombonana mahazatra ireo izay manatrika ny lalao olympika amin'ity taona (2008) ity: tsy azo itondrana sakafo sy zava-pisotro avy any ivelany, tsy ekena ny fango sy ny marika ara-barotra rehetra … saingy misy amin'ireo rehetra ireo fitsipika iray toa nanorisory ny mpiserasera maro, porofon'izany ny fivoahany tamin'ny lohateny lehibe tao amin'ny tranonkala vavahadin-tserasera maro: Tsy azo entina ao anatin'ny toerana Olaimpika ny sora-baventy hoe “Alefa Shina!”.
Noho ny lanonana atao mandritra ny fiampitan'ny afo olaimpika avy ao Hong Kong mankao Shenzhen (sy ny manaraka) amin'ny fiandohan'ity andro mafana ity, hanampy hisorohana izay korontana mahery setra sy mafapàna mandritra ny Lalao ny fitsipika tahaka izany. Farafaharatsiny, tena niteraka adihevitra mafana tokoa izany, ary maro ireo mpiserasera manontany tena hoe: “Fa nahoana?”
Ny valiny tsotra dia hoe tsy azo ampidirina ao amin'ny Lalao Olaimpika ny sora-baventy mihoatra ny 2 metatra ny lavany ary 1 metatra ny sakany. Iray amin'ireo mpisera aterineto maro izay namerina namoaka ny fanambarana ofisialy izay efa nivezivezy niaraka tamin'ny tantara androany i Jiuduo, naseho ho resadresaka teo amin'ny mpanao gazety tsy fantatra anarana ao amin'ny Xinhua sy ny solontenan'ny Komity Mpikarakara ny Lalao Olaimpika tsy fantatra anarana ao Beijing izany. Ity ny fanontaniana momba ny fandraràna ny sora-baventy “Alefa Shina!”;
Mpanao gazety: Nahoana no noresahana ny fandraràna ny sora-baventy na ny afisy toy ny hoe “Alefa Shina!?
BOGOC: Hotontosaina eto Beijing ity Lalao Olaimpika ity, ary isika no mpampiantrano. Fantatr'ireo mpirotsaka an-tsitrapo fa hanoratra “Alefa Shina” daholo ny rehetra, izay tsy dia ratsy loatra, saingy ho haintsika ve ny hamaky ireo sora-baventy soratan'ny mpanatrika avy amin'ireo firenena mihoatra ny 200? Mbola avelantsika ve izy ireo sa tsia? Raha mieritreritra iray segondra fotsiny isika, tamin'ny Lalao Olaimpika teo aloha tany Atena na ny lalao manaraka tany Londra isika, raha sakanan'izy ireo tsy hitondra sora-baventy nomanintsika isika satria tsy mahay mamaky teny Shinoa izy, ahoana no fahatsapantsika?
Ary koa, maneho ny firaisan'ny kontinanta dimy ireo peratra dimy Olaimpika, sy ny fihaonan'ireo atleta manerana izao tontolo izao ho amin'ny fifaninanana ara-drariny sy misokatra amin'ny Lalao Olaimpika ao anatin'ny toe-tsaina tia namana; Ny toe-tsaina amin'ny fifaninanana Lalao Olympika dia toe-tsaina marina sy tia mifaninana fotsiny. Tianay ny Lalao Olaimpika hihoatra ny foto-kevitra ara-politika rehetra, na i Shina, na i Japana, na i Amerika na i Frantsa, mba ho tahaka ny peratra Olaimpika ny olona rehetra, ary afaka mankafy ny fankalazana miaraka, amim-piravoravoana ny olon-drehetra, mampivoatra ny fifankahazoana. Ny endriky ny sora-baventy isan-karazany eny an-toerana dia mety hanimba ity karazan-drivotra ity, izany no antony nahatonga ny Komity Mpikarakara ny Lalao Olaimpika Iraisam-pirenenana nisisika hatrany nametraka ity fitsipika ity.
Sa tsy misy ifandraisany amin'ny fampisehoana fitiavan-tanindrazana Shinoa be tara-pahazavana (UV) loatra ve izany? Avy amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratr'i Jiuduo:
Nahoana? Noho izany, mbola afaka mitondra sora-baventy avy amin'ny firenena hafa aho “Alefa [x] firenena!”? Sangisangy izay tsy ho vitanao akory ny mitondra izany ao an-tanindrazanao manokana.
Koa mbola afaka miditra ve aho raha mitondra sainam-pirenena 1.9m x .9m? Raha matahotra ianao, dia lazao fotsiny fa matahotra ianao, ary mialà amin'ny fiteny efa fandre. Raha miteny fotsiny ianao hoe matahotra ny olona mihiaka teny filamatra momba ny fahaleovantena Tibetana, tsy misy olona hanome tsiny anao, ka inona no dikan'ity?